Janan Ayaa Safar ugu Ambabaxay Dalka Itoobiya. – STAR FM SOMALIA
Wasiirkii hore ee Amniga dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa safarkii ugu horreeyay ee dalka dibadiisa ah kuk tegay Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya tan iyo markii ay dowlada Federalka ka joojisay dacwado loo haystay.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya socdaalka C/rashiid Janan ee Addis Ababa oo uu ku wehliyo Wasiiru Dowlaha Gaadiidka C/raxmaan Dheere oo ahaa ninkii hoggaaminayay wada hadalkii iyo qorshihii C/rashiid Janan isugu soo dhiibay dowladda.
Ilo kala duwan ayaa sheegaya in qorshe ku saabsan dhaq dhaqaaqyada Gobolka Gedo uu u tagay Addis Ababa, halka warar kalena sheegayaan in arrimo Baasabor uu u tagay.
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa bishii March ee sanadkaan 2021 isku soo dhiibay dowladda Federaalka, isla markaana heshiis la galay.